Uyashuba umbango wesikaMkhize | Isolezwe
Uyashuba umbango wesikaMkhize
Isolezwe / 1 February 2013, 09:24am / CELANI SIKHAKHANE
UMnuz Senzo Mchunu ophakanyiswe|yi-ANCWL ekubeni yiphini likaNobhala wesifundazwe.
Unkk Peggy Nkonyeni okhale ngaphansi ku-ANCWL.
UMnuz Willies Mchunu i-ANCWL efuna ukuthi avale isikhala sikaDkt Zweli Mkhize.
NJENGOBA sezihubela sakusha ngesikhundla sikaSihlalo we-ANC KwaZulu-Natal kubonakala ushuba umbango ngesikhundla esiphethwe uDkt Zweli Mkhize.
Uphiko lwabesifazane be-ANC esifundazweni luthathe isinqumo sokuba lukuhoxise ukweseka uSomlomo wesiShayamthetho, uNkk Peggy Nkonyeni, ekutheni abe nguSihlalo kaKhongolose kodwa lwaphakamisa uMnuz Willies Mchunu okumanje uyiphini likaMkhize.
Lokhu kwenzeke emhlanganweni we-ANCWL wesigungu sesifundazwe uphiko olukhiphe kuwo uhlu lwamagama abaholi elifuna bakhethwe engqungqutheleni yesifundazwe ezoba ngoMashi.
Unobhala we-ANCWL, uNkk Nonhlahla Khoza, uthe igama likaNkk Nkonyeni livelile ngesikhathi bebhunga ngodaba kodwa kwabuye kwathathwa isinqumo sokuba lihoxiswe ngoba usadingeka ekubeni wuMgcinimafa we-ANC eKZN.
Uthe bavumelane ngokuthi uMnuz Willies Mchunu abe nguSihlalo, bese esekelwa wuNksz Nomusa Dube, bese kuthi uMnuz Senzo Mchunu akhethwe njengephini likaNobhala yize ayengunobhala phambilini.
“Esivumelene ngakho wukuthi silande uSenzo Mchunu ekutheni azoba yiphini likaNobhala ngoba siyayazi imisebenzi yakhe kusuka ethatha i-ANC ezoyibeka ezingeni ekulo njengamanje ngesikhathi esenguNobhala.
“UWillies Mchunu yena simbona edingeka ekutheni adale ubumbano kumadlelandawonye nanokuthi ungumuntu ongumkhombandlela ku-ANC obaluleke kakhulu,” kusho uNkk Khoza.
Uthe abakuqaphele ngoNkk Nkonyeni wukuthi ukhombise ukuzikhandla kulesi sikhundla akuso sokuba wumgcinimafa nokuholele ekutheni i-ANC izuze okuningi.
I-ANC kuzothi ngoMashi 8-10 ibe nengqungquthela yesifundazwe ukuze kukhethwe abaholi abasha ukuvala isikhala sikaMkhize.
Ngakolunye uhlangothi, uSenzo Mchunu uthwelwe ngeqoma yizifunda eziningana okubalwa kuzo iMoses Mabhida, Lower South Coast nezinye.
Abaholi baseMoses Mabhida, uMnuz Alpha Shelembe noMnuz Supa Zuma, batshele Isolezwe ukuthi isinqumo esithathiwe ezinhlakeni zabo wukuthi bafuna uSenzo Mchunu ahole isifundazwe.
“Sihlanganile nazo zonke izinhlaka ze-ANC esifundeni sethu kusuka emazingeni amagatsha savumelana ukuthi sifuna uSenzo Mchunu abe ngusihlalo. Ezinye izikhala asizazi ngoba isikhundla okumele sivalwe sisodwa – esikaSihlalo kuphela,” kusho uZuma.
ITheku, ngomlomo kaNobhala walo uMnuz Bheki Ntshangase, lithe ibingakaluxoxi udaba, ngakho alikabibikho igama asebeliphakamisile.
Abanye abaholi bakhombise ukungayizwa kahle indaba ye-ANCWL yokuphakamisa uSenzo Mchunu ekubeni yiphini likaNobhala, bathi lokhu kufana nokweyisa.
Bebesho nokuthi kumele kwaziwe ukuthi ingqungquthela akuyona eye-ANCWL kodwa ekaKhongolose. I-SACP yona ithi asikho isidingo sokuthi kuphakanyiswe amagama kwesikaSihlalo ngoba ukhona uMnuz Willies Mchunu oyiphini.